The angst i love? - Bai_he - Wattpad
The angst i love?
#kaisoo #taoris #baekhyun #chanyeol #chen
လူစားထိုး သရုပျဆောငျ (translation, unicode)
470K 72.5K 66
(Zawgyi versionလည်း ရှိပါတယ်၊ Profile မှာ ၀င်ရှာကြည့်ပါ) ကြိုရှီအနျး ဒုတိယအကွိမျ ရှငျသနျခှငျ့ရခွငျးဟာ ဘုရားသခငျက သူ့ကိုပိုခဈြလို့ပဲလား၊ သူ့ကို နှိပျစကျလို့မဝသေးလို့ဘဲလား မသိ။ အရငျဘဝတုနျးက သူက big star ဝမျယုတုနျရဲ့ လူစားထိုး စတနျ့သမား။ ဒါပမေယျ့ ရိုကျကှငျးပျေါမှာတငျ လူစားထိုး ဖွဈရတာမဟုတျ။ သူနှဈနှဈကာကာခဈြရတဲ့ ယနျမင...
1.3M 153K 52
​Fairytale In Golden Palace [Completed]
34.8K 2.4K 5
Original Name:Lament at Changmen Palace Original Author:Qiao Xi English Translator:cathercity အကယ်​၍သာအစကတည်းက ကျွန်​မလည်း ဧကရီတစ်​ပါးရဲ့ အာဏာတစ်​ခုတည်းကိုပဲ လိုချင်​ခဲ့မယ်​ဆိုရင်​ ကျွန်​မ ရှင့်​ကို အခုလိုမျိုး မြန်​မြန်​ဆန်​ဆန်​ကြီး ဆုံးရှူံးချင်​မှ ဆုံးရှုံးရမှာ​ပေါ့။ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း​လေ ကျွန်​မလိုချင်​ခဲ့ဖူးတာက ရ...
Take the way To Love /Season 2/ (Completed)
551K 66.9K 58
Take the way to Love (Completed)
503K 40.8K 35
Sorry For loving you.. ခဈြမျိလို့ တောငျးပနျပါတယျ
193K 4K 10
113K 16.4K 33
Oh Sehun ♡ LuHan ဘယ်​သူ​တွေ ဘာ​ပြော​ပြော ငယ် က ကိုကို့ရဲ့ ညီငယ်​​လေးပဲ . . . ဘယ်​သူမှ ဘာမှ မ​ပြောဘူး ကျ​နော်​ တစ်​​ယောက်​ပဲ ​ပြောမယ်​ ငယ်​က ကိုကို့ရဲ့ ညီ​ငယ်​​လေး မဟုတ်​ဘူး . . . ဘယျသူတှေ ဘာပွောပွော ငယျ က ကိုကို့ရဲ့ ညီငယျလေးပဲ . . . ဘယျသူမှ ဘာမှ မပွောဘူး ကနြျော တဈယောကျပဲ ပွောမယျ ငယျက ကိုကို့ရဲ့ ညီငယျလေး မဟုတျဘူး...
Far .. ~ [ Zawgyi ] [ Completed ]
69.8K 7.4K 26
It is nothing.. ~ Just ..abreaking ... [ အဲ့တာက .. ဘာမှမဟုတ်​ပါဘူး.. ကွဲ​ကြေပျက်​စီးမှု တစ်​ခု ပါပဲ.. ]
Dear Nancy's Love!
32.6K 3.9K 10
မင်းချစ်​သူကို တစ်​ခါ​လောက်​​တော့ ​နောင်​တရ​စေချင်​မိတယ်​ နန်​စီ..
534K 86.9K 91
မင်းတစ်ဘဝတာပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ ကိုယ်နှစ်ရာနဲ့ချီအထီးကျန်ဖို့ဆိုတာထိုက်တန်ပါရဲ့လေသလား။ BL Yaoi [Zawgyi+Unicode]
111K 12.1K 25
အစ်​ကို့ အပြုံး​တွေက ကျွန်​​တော်​ကိုးကွယ်​တဲ့ ကျိန်​စာ​တွေ ~ ~ ကျွန်​​တော်​​ထွေး​ပွေ့တဲ့ အကြင်​နာ​တွေ ~ ~ #sekai #kaihun #my isolated world
A Voice of My heart
It's notagood story >_<
84K 5.2K 13
yeol;မင်းအမေကိုတော့အရမ်းမုန်းပေမဲ့.....မင်းကိုတော့..... sehun"ကျွန်တော့ကိုမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်......မုန်းတယ်လို့မပြောလိုက်ပါနဲ့ကိုကို main otp-chanhun side otp-xingho (yaoi)
13.4K 1.6K 10
သူ ချစ်​ခဲ့သည်​။ ချစ်​​နေဆဲပင်​။ ဆက်​ချစ်​​​နေဦးမည်​။
303K 33.5K 29
6.4K 585 4
အမြတ်​တနိုးဆိုတဲ့အရာ​တွေ တလွန်​တကျူးဖြစ်​လာခဲ့တဲ့​နောက်​ သိပ်​ချစ်​တတ်​တဲ့လူသား​တွေအပြစ်​ဖြစ်​ကုန်​ကြတာပါပဲ
One Night, One Month, One Year, One Lifetime(Myanmar translation)
8.8K 579 3
ကောင်းဖိန် ရှင့်ရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး ရှင်နဲ့ဒီဘဝခရီးကို အဖော်ပြုပေးဖို့ ကျွန်မဒီည ဒီတစ်လ ဒီတစ်နှစ် ဒီတစ်ဘဝကို ဖြတ်သမ်းလာခဲ့တယ်ဆို ရှင်ယုံကြည်ရဲ့လား.." အချစ်နဲ့အမုန်းဆိုတာ စည်းတစ်စည်းသာ ကွာဝေးတယ်ဆိုသလိုဘဲ အရမ်းမုန်းလွန်း၍ အချစ်ဆိုတဲ့စည်းဘက်ကိုကျော်လွန်ခဲ့သော်လည်း မိမိကိုယ်ကို မသိခဲ့တဲ့ ...... "ကောင်းဖိန်" ပထမဆုံးနဲ့ေ...
❝𝐊𝐘𝐎𝐄 𝐊𝐀 𝐋𝐀𝐘❞
284K 25.5K 25
ကွိုး​တှကေို သ​ဘောမကဘြူး အလားတူစှာပဲ ခငျဗြားကိုလညျးကြှနျတျောသ​ဘောမကဘြူး ခငျဗြားကိုယျ​တိုငျ​က ကြှနျတေျာ့ကိုတဈ​နညျးမဟုတျ​တဈ​နညျးရဈ​ပတျ​နတေဲ့ ကွိုးတဈ​စမို့ 30/4/2018 I write this "Kyoe Ka Lay" Fiction to appreciate PARK JIMIN,in other words, JIMIN's both visible and invisible love for JEON JUNGKOOK. U may know How Mu...
Hana (はな) Chanbaek Season-1 [ Completed]
150K 18K 41
Sometimes, love is really fantastic
"မလွတ်​​မြောက်​နိုင်​တဲ့ ချည်​​နှောင်​ခြင်း​တွေနဲ့ မင်းဆီမှာ အချည်​​နှောင်​ခံချင်​ခဲ့တယ်​။အရိုးသားဆုံးဝန်​ခံမှုဟာ...မင်းကိုဘယ်​​တော့မှ မမုန်းခဲ့တာပါပဲ။" Sehun×Baekhyun Cover by @MaaYa_H(Now) A new cover by @May_ZiTao Started date : 1.6.2018
107K 8.4K 21
အသက် ၃၀ကျော် ၄၀ နား ကပ်တော့မှ အချစ်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အချစ်ရဲ့ အချစ်က ကျွန်တော် မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကျွန်တော်ဟာ အချစ်ကို ဘာလို့ နောက်ကျမှ တွေ့ခဲ့ရတာလဲ။ အစကတည်းက ပေးမတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသားနော်။ ဝန်ခံချက်။ တရုတ်ဝတ္ထုတစ်ခုကို Sekai အဖြစ် ပြန်လည် သရုပ်ဖော်ထားပါသည်။ Warnings: Rated M Ag...
71.8K 4.7K 13
ခင်ဗျားရဲ့ဒုတိယလူဆိုတာသိပါရက်နဲ့ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော့နှလုံးသားရဲ့ပထမနေရာမှာနေရာတစ်နေရာပေးခဲ့မိတာဟာ ကျွန်တော့မိုက်မဲမှုဆိုပေမယ့် အရှုံး အမုန်း ထိုမိုက်မဲမှုတွေကို ရင်ဝယ်ပိုက်ရင်း ခင်ဗျားကို နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိချစ်သွားနေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား သိပေးပြီး ယုံကြည်ပေးမယ်ဆိုရုံနဲ့ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က အသက်၇ှင်ဖို့ လုံလောက်နေခဲ့တာပါ...
66.6K 6.9K 16
ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့စရာတွေအားလုံးဟာ ပုံပြင်ဆန်တယ်... Happy Ever After ဆိုတဲ့ အဆုံးသတ်မျိုးဟာ နတ်သမီးပုံပြင်တွေထဲမှာပဲ ရှိတတ်တာမျိုး...။
21.4K 1.9K 5
One Shot Main Cast - Luhan and Sehun
​သွေး​ရောင်​ခြယ်​နှလုံးသား Complete ( BL OC ) Zawgyi+Unicode
295K 24.9K 40
ကျွန်​​တော်​ ထိ​တွေ့ခွင့်​မရှိတဲ့... ကျွန်​​တော်​ ​ငေးကြည့်​​နေရတဲ့... ​ကောင်းကင်​ကြီးက သူ့ပိုင်​ရှင်​လက်​ထဲ ပြိုဆင်း​ပေးလိုက်​မယ်​ဆိုရင်​​ရော... ပိုင်​ဆိုင်​လိုခြင်းအလျှဉ်းမရှိပဲ ​ငေးကြည့်​​နေရခြင်းကိုသာ​ကျေနပ်​တဲ့ကျွန်​​တော်​က ​ငေးကြည့်​​နေခွင့်​ကို​တောင်​ဆုံးရှုံးလိုက်​ရမယ်​ဆိုရင်​​ရော... အ​တွေးလွန်​ခြင်း ဆို...
342K 37.8K 52
❝ ကျ​နော့်​ကို ချစ်​တယ်​ လို့ ​ပြော​ပေးပါလား Hyung ❞ ​ပြောလိုက်​တဲ့ လူမှာလည်း မျက်​ရည်​ စ ​တွေ နဲ့ ။ ​ပြောခံရတဲ့ လူမှာလည်း မျက်​ရည်​စ ​တွေ နဲ့ ။ နှစ်​​ယောက်​စလုံးမှာ အချစ်​​တွေနဲ့ ။ နာကျင်​မှု​တွေနဲ့ ။
36.5K 3.7K 15
သနားကြင်နာခြင်းကင်းစွာ... ​​​နှလုံးသားမဲ့စွာဖြင့် ​ချစ်​သော... ။
240K 18.5K 34
ကျွန်တော်ကလား? Wang ZiYi ရဲ့ Sugar Baby လေ Birthday present for my beloved TD jiejie ❤
489K 58.8K 45
ဖိုးဖိုးအားကိုးပီးအရမ်းချစ်​ရတဲ့​မွေးစားသား၊​မေ​မေတို့အရမ်းချစ်ကြတဲ့​​မောင်​အငယ်​​​လေး၊ကျ​နော်​ချစ်​ရပါ​သော​မွေးစားဦး​လေး~~ #ChanBaek #JustFanFic #July15/2017 (Zawgyi+Unicode)
164K 12.9K 20
ကျိန်စာကိုဖန်တီးတဲ့သူက သူဆိုတဲ့နတ်ဆိုးဖြစ်နေတော့လည်း ကျွန်တော်ဒီကျိန်စာထဲကထာဝရမလွတ်မြောက်ချင် တော့ဘူး ##### Krisyeol *******